एक खाता कर, दस्तुर, र कागजातहरू मा खाता खोल्न जानकारी खुवाउने गर्दा कर मा, खाता सन्देश खोल्ने को समय शीर्षकमाथिको को सूचना।
आंतरिक राजस्व सेवा संग मजाक गर्न राम्रो छ। असामयिक भुक्तानी कर को घटना मा, यो सेवा तपाईं आयातित गर्न सक्ने धेरै थाहा छैन पेनाल्टी र पनि सबै भन्दा सानो infraction लागि तपाईं युरोपेली संघ एउटा भिसा प्राप्त हुनेछ भन्ने तथ्यलाई योगदान। यहाँ कुनै पनि आय वा आफ्नो वित्तीय सञ्चालन बारे गम्भीर सबै कर कार्यालय सूचित गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया एक पी खोल्न वा एक निजी संस्थामा वित्तीय सञ्चालनका लागि जिम्मेवार छ गर्नेहरूका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ - कर कार्यालय ध्यान सबै डाटा संरचना ट्रकहरु।
त्यहाँ देखा पर्न कुनै पैसा छ किनभने धेरै, किन कर मा खाता खोल्न सन्देश आवश्यक बुझ्न छैन। तर, यो एक आवश्यक प्रक्रिया हो, धेरै वर्ष को लागि बाहिर छ, जो छ। र कर अधिकारीहरूले दर्ता थिएन जो खाता, को संचालन, अवैध छ। यो खाता मालिक तुरुन्तै कि आपराधिक छ, एउटा वित्तीय Wheeler-बिक्रेता मा उत्तेजित गर्दछ।
त्यसैले, यो प्रक्रिया पुल छैन। र तुरुन्तै एउटा सन्देश उपयुक्त अख्तियार गर्न खाता खोल्न पठाउनुहोस्। एक सामान्य नियम जस्तै, बैंक को कर्मचारीहरु खुले आफ्नो सेवा गर्ने प्रयोग ती चेतावनी दिए। समय को के अवधिमा तपाईं कर मा खाता खोल्न आवश्यक सन्देश पठाउन? उद्घाटन को मिति देखि7पात्रो दिन भित्र - मिति स्पष्ट delineated। आफ्नो संगठन गर्दैन भने, त्यसपछि कम्पनी को लागि 5,000 rubles को राम्रो गर्न subjected, र यसको नेता रूपमा, 2000 स्वचालित रूपमा तपाईं कर सेवाको "कालो सूची" मा राखिनेछ तिर्न हुनेछ, त्यसैले निरीक्षकों अक्सर हेर्न भनेर छक्क छैन आफ्नो चेकबाट आफ्नो कम्पनी गर्न। र यो धेरै राम्रो छ। त्यसैले कर मा खाता खोल्ने मा एक समय रिपोर्ट गर्न राम्रो छ।
तपाईंले यो सूचना पठाउन क्रममा के गर्न आवश्यक के? बस कर कार्यालय, आफ्नो संगठन दर्ता गरिएको छ जसमा आउन, र तपाईं फारम नम्बर सी-09-1 बाहिर दिइएको छ कि सोध्नुहोस्। त्यहाँ भर्न मात्र2पानाहरू छन् - र तपाईंले कति तपाईं कागजात भर्नका लागि आफ्नै व्यवसाय खोल्ने थियो विचार गर्दा यो धेरै छ। पहिलो पृष्ठमा तपाईं राजधानी अक्षर र legibly मा प्रश्नहरूको जवाफ लेख्नुहोस्। मुख्य रूप तपाईंको कम्पनी बारेमा जानकारी हुनेछ। दोस्रो पाना जहाँ, कहिले र कसले बारेमा प्रश्नहरू समावेश हुनेछ खाता खुलेको छ। दोस्रो पृष्ठमा तपाईं जो कागजी कार्रवाई बाहिर भरिन्छ व्यक्ति को नाम र थर निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। खैर, एउटा खाता खोल्न र एक सन्देश भर्न एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ। अन्यथा, कर मा खाता खोल्न सन्देश अमान्य छलफल गरिनेछ।
एउटा खाता खोल्न गरेको बैंक को मद्दत अनुरोध गर्न अघि बढाउन प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरू कर कार्यालय गर्न कागजातहरू आकर्षित गर्न तपाईंलाई उपयोगी हुनेछ। उनीहरूले सन्देश नै संलग्न हुन आवश्यक हुनेछ। तपाईंको खाता सिरियल नम्बर, सही खोल्ने मिति, नाम बैंक को कार्ड नम्बर, बैंक को ठेगाना, साथै मानक सम्म सञ्चालन सञ्चालन गर्न जो: यसरी, कर मा खाता खोल्न सन्देश निम्न जानकारी हुनु पर्छ Inn, कैट र वित्तीय संस्थाले को BIC । तल तपाईं मात्र होइन आफ्नै हस्ताक्षर राख्न छ, तर पनि खाता खोलिएको थियो जसको लागि संगठन को छाप। फेरि अमान्य छलफल गरिनेछ कर गर्न खाता खोल्ने बारे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी बिना।
तपाईं बैंक मा कागजातहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र कम्पनी तिनीहरूलाई भर्नुहोस्। तर यो पोस्ट द्वारा व्यक्तिगत लिन, वा यो लामो समय, वा नष्ट जान सक्नुहुन्छ सुरक्षित। यो जोखिम छैन राम्रो छ।
आफ्नो प्रत्यक्ष कर्तव्य, कानून द्वारा समर्थित - एक कर मा खाता खोल्ने सन्देश तथ्यलाई। के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ भने, कर कोड podp.12लेख 23 को दावी पढ्नुहोस्। खैर, यी अन्यथा तपाईं जरिवाना तिर्न पैसा धेरै योगफल जोखिम, कर सधैं तपाईं र बैंक कर्मचारीहरु सिक्न पर्छ जो खाता प्रकार छन्। यो मुख्यतया एक छ विदेशी मुद्रा खाता, त्यसपछि बन्दोबस्त, कार्ड खाता पछि, यो खोल्ने घोषणा गर्न महत्त्वपूर्ण छ एक बैंक खाता विदेश, साथै एक विशेष मुद्रा। ट्रान्जिट नै र जम्मा खाता - दुई प्रजातिहरू, कर सूचित गर्न सक्दैन जो खोल्ने छन्।
उद्यमको सम्पत्ति मा कर। सरल साझेदारी र leaseback सम्झौता प्रयोग अनुकूलन।
कर सम्बन्ध र आफ्नो मुख्य विशेषताहरु
विकल्प: एक महिला सहयोगी जन्मदिन दिन के
मानववादीहरू के हुन्?
सूखे फलको कम्पन गर्नुहोस् - शरीरमा अधिकतम लाभको लागि एक नुस्खा!
नेप्रोन दस्ताने माछा पकडने को लागि। सही मछुआरे दस्ताने - तिनीहरू के हुनुपर्छ?
रियल मैड्रिड देखि स्पेनी मुद्रा - यूरो। सिक्का स्पेन
कोरल बीच Rotana Resort Montazah 4